Mini Washer အဝတ်လျှော်စက် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Mini Washer အဝတ်လျှော်စက်
ရောင်းချသူ: Theint Theint Kyaw
အဆောင်နေကျောင်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများ အတွက်နေရာစားသက်သာတဲ့အပြင် အဆောင်ပြောင်း၊ အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါ အလွယ်တကူသယ်ယူသွားနိုင်မယ့် စက်ကလေးပါ။
မွေးကင်းစ သားသား မီးမီးလေးတွေရဲ့ အနှီး၊ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီလေးတွေကိုလဲ လူကြီးဝတ်တွေနဲ့ ရောမလျှော်ပဲ သီးသန့်လျှော်မှ ပိုးမွှား၊ ကူးစက်ရောဂါတွေ မကပ်ညိနိုင်မှာပါ။
မိန်းကလေးဝတ် ထမီ၊ စကတ် ဘာဘာညာညာတွေကို ယောက်ကျားလေးအဝတ်တွေနဲ့ ရောလျှော်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုလား. ဘာဆိုလား........
အဲ့လို အတွေးမျိုး အယူမျိုးတွေ ရှိနေတဲ့သူများ အတွက် သပ်သပ်ခွဲလျှော်ဖို့
Mini Washer အဝတ်လျှော်စက်လေးရှိနေပြီနော်
ကလေးအဝတ်၊ အနှီး၊ ခြေအိတ်၊ အတွင်းခံ၊ အဝတ်အစား နည်းနည်းပါးပါးလျှော်ဖို့ အဝတ်လျှော်စက်အကြီးနဲ့ကလည်း အချိန်ကုန်၊ ရေကုန်လို့စိတ်ပျက်နေသူများအတွက်လဲ mini washer အဝတ်လျှော်စက်အသေးလေးရှိပါတယ်နော်
ကလေးအဝတ်အစား ၆ ထည် (or) လူကြီးရှပ်အင်္ကျီ ၄ ထည် (or) ဘောင်းဘီ ၃ ထည်ခန့် လျှော်နိုင်ပါသည်။ ခံနိုင်ဝန်အား 3.5 kg ပါ။
အဝတ်လျှော်တာရော အဝတ်ညစ်တာပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
UV Protection စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် အဝတ်လျှော်နေစဉ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် ဘတ်တီးရီးယား၊ ရောဂါပိုးမွှားများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင် ပေးပါသေးသည်။
220V 240W အသုံးပြုရပါသည်။ မီးအားစားလည်း အလွန်သက်သာပြီး ရေအနည်းငယ်ဖြင့်လည်း လျှော်နိုင်ပါသည်။
ဘူးပါကင်အပါ အလေးချိန် 5KG စက်သီးသန့်အလေးချိန် 4.5KG ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ထားနေရာလည်း အများကြီးမလိုပါ။
အဝတ်အထည် 3.5KGအထိ ထည့်လျှော်နိုင်သောကြောင့် ကလေးအမွှာပူး မွေးထားလျှင်သော်မှ တနေ့လုံး ပါသမျှ ပေါက်သမျှ တထိုင်တည်း လျှော်ဖွပ်နိုင်ပါသည်။
Control ခလုတ်၂ခုပါရှိပြီး လျှော်ရန်၊ ရေညှစ်ရန် တစ်ခု၊ ၁၅မိနစ်အထိ လိုသလို Timer ပေးထားနိုင်ရန် တစ်ခု ပါဝင်သဖြင့် စိတ်ချလက်ချ လျှော်ထားခဲ့ပြီး အိမ်အလုပ်များ ဆက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုပြီးသား DOP ပလပ်စတစ်မျိုး မသုံးထားပဲ PP ကော်စေ့အကောင်းစားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အဝတ်လျှော်ကန်ကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ အတွင်းထိ မြင်ရနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်တို့၏ အဝတ်အစားကို (ယားယံမှုမဖြစ်စေအောင်) အသန့်စင်ဆုံး လျှော်ဖွတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆပ်ပြာရည်ကို အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းအောင် ဒလက်တွင် ရေမြှုပ်လုံးလေးများ ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် ချေးချွတ်နိုင်မှုစွမ်းအားကို ပိုမိုထောက်ကူပေးပါသည်။
အဝတ်လျှော်စက်အကြီး ရှိသူများပင် အသေးအဖွဲ၊ ဟိုဟာဒီဟာ လျှော်ဖို့ ဖွတ်ဖို့ ထပ်မံဝယ်ယူကြသော မီတာမစား ရေမဖြုန်းသည့်MINI အဝတ်လျှော်စက်လေးကို 38000 Ks ထဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီရှင် ။
Messenger / Viber တို့တွင်
3. ဖုန်းနံပါတ် တို့ကို ပေးပို့၍မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်
အခြားမြို့များကို ငွေလွှဲဝင်ပြီး ၂ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်သည့်ကားဂိတ်ကို ပို့ပေးပါတယ်ရှင့် ။
Ph.no- 09-967931108 /
09962396254 ( Viber )
အမည်: Mini Washer အဝတ်လျှော်စက်